Izincwadi zibonisa kanjani i-cholesterol yegazi ezinhlamvwini zesiLatini > Isifo sikashukela
Ukuqokwa kwe-cholesterol yegazi
I-cholesterol (cholesterol) iyinhlangano eyakheke ngaphakathi komzimba womuntu, futhi ivela ngaphandle, okuyingxenye ebaluleke kakhulu yolwelwesi lwamangqamuzana futhi ibambe iqhaza ekwakhiweni kwama-hormone ahlukahlukene nezinto ezisebenzayo zebhayoloji. Ukuqokwa kwe-cholesterol ekuhlolweni kwegazi kufanele kwaziwe yiwo wonke umuntu, ukuze kuthi, lapho sebethole umphumela othize ngesikhathi sokuhlolwa, babe nomqondo ofanele ngempilo yabo.
I-cholesterol iba nini usongo?
I-cholesterol ayixubeki emanzini, ngakho-ke, idinga amafomu akhethekile okuhamba (ama-lipoprotein) ukuze izungeze umzimba futhi yenze imisebenzi yayo.
Kwesinye isikhathi i-cholesterol umzimba idinga okungaka iba isongo kuyo ─ lapho umzimba wamafutha uphazamiseka futhi i-cholesterol iqala ukufakwa odongeni lwemithambo yegazi futhi inciphise ukulutha kwayo. Lesi sifo siyaqhubeka kancane kancane, ama-depitits athola yonke indawo yemithambo evela ngaphakathi, ubungozi bokuqothuka ngokuphelele kwemithambo noma ukuqhekeka kwethotho kuyakhula ngokuthuthukiswa kwezinkinga ze-atherossteosis.
Ukulawula umzimba we-metabolism wamafutha emzimbeni, udokotela ubeka ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical, okukhombisa izinga le-cholesterol ephelele, i-triglycerides, izingxenyana zezingxenye ezithile ze-lipoprotein, kanye ne-coefflements of atherogenicity.
Udokotela angabuye achaze ukuthi i-cholesterol ngqo kanye nezingxenyana zayo kukhonjiswa kanjani kuhlaziyo.
Ngabe i-cholesterol ikhonjiswa kanjani kulokhu kuhlaziya? Lo mbuzo uyathakazelisa ezigulini ezifuna ukuzimela ziphendule imininingwane yokuhlolwa kwegazi okune-biochemical. Kubalulekile ukugcizelela ukuthi ngaphandle kolwazi olufanele embonini yezokwelapha kuzoba nzima kakhulu futhi kwesinye isikhathi kungenzeki.
Uchwepheshe kuphela ozokwazi ukunikeza ukuhlolwa okulungile kwemininingwane etholakalayo ebheka zonke izici ezinomthelela ngendlela yokuba khona kwama-concomitant pathologies, ubulili kanye nobudala besiguli. Ukuzixilonga kungaba yisilinganiso sesikhashana kuphela uma isiguli singenalo ithuba lokubonana nodokotela ngenxa yezimo zempilo. Ukunqunyelwa kusengaphambili akufanele kube yisisekelo sokuthola indlela yokwelashwa.
Muva nje, ososayensi nodokotela bebelokhu benaka ngokukhethekile ocwaningweni lwento enjalo. Iqiniso ukuthi kuze kube muva nje, utshwala obunamafutha bebubhekwa njengengxenye eyingozi enomphumela we-pathogenic kuphela emithanjeni yegazi. Kungekudala, ososayensi bafika esiphethweni sokuthi umzimba womuntu awunakuba khona ngaphandle kwengxenye enjalo, ngoba uhlinzeka:
ukuvuselelwa kabusha kolwelwesi oluhlelekile,
Iba yingxenye yezinqubo "zokwakha" amaseli amasha,
ubamba iqhaza ekwakhiweni kwama-hormone ocansi abantu,
inikeza ukukhiqizwa kwe-Vitamin D okunempilo ngumzimba,
Isiza ukugcina ibhalansi efanelekile ye-collagen.
Kungani kwakukhona ukungavumelani okuthile ngesikhathi sokutadisha le nto ekutholeni izinzuzo zayo nokulimazeka kwayo, futhi into ekhiqizwa ngumzimba ngokwayo ingazilimaza kanjani izitsha? Iqiniso ngukuthi egazini lomuntu, cholesterol ikhona ngesimo sendawo enamaphrotheni. Izakhiwo ezifanayo zingaba nobunzima obahlukahlukene. Ukuqokwa kwe-cholesterol ekuhlolweni kwegazi kungaba ngale ndlela elandelayo:
I-high density lipoprotein (ebizwa ngokuthi i-HDL) - iyinto esetshenziswayo futhi iqinisekisa ukukhishwa kwe-cholesterol deposits emithanjeni yegazi,
i-low density lipoprotein (LDL) - okuhlanganisiwe okunqwabelana ngokweqile emzimbeni kuyingozi ebantwini. Ngokuphikisana nesizinda sokwephulwa okunjalo, isisusa sokubonakaliswa kwe-atherosclerosis senzeka, kunengozi ye-thrombosis ngokuqhekeka okwalandela kwaleyo nto,
i-low density lipoprotein (VLDL) yinto eyingozi kakhulu, ngokwanda kokuxineka lapho igazi lesiguli liqala ukuba namafu futhi lithole i-milky hue ethile. Leli khompiyutha liqukethe ikakhulukazi i-triglycerides ne-cholesterol.
Ukuqokwa kwe-cholesterol ekuhlolweni kwegazi kubaluleke kakhulu ezinhlelweni zokuxilonga. Ngokulandela uhlobo loshintsho lwezinkomba njengoba ukwelashwa kuqhubeka, udokotela uthola ithuba lokulungisa ukwelashwa. Ngesikhathi sokuhlolwa, inkomba yethi yengxenye ngayinye ihlaziywa ngamunye. Inani le-cholesterol ephelele ayikuvumeli ukuthola isithombe esinembile, lokhu kungenxa yokuthi kuyinkomba ye-atherogenicity, eyethulwe njengengxenye yesilinganiso se-HDL kwi-LDL, lokho kubalulekile.
Ukunqunywa kwenkomba ye-atherogenic
Ukutadisha kwenkomba ethile ye-atherogenic kukuvumela ukuba uthole isithombe esinembile, esifundisayo ekunqumeni isilinganiso phakathi kokuqoqeka kwezinto ezinhle nezimbi.
Lapho ubala inani, kusetshenziswa ifomula elula, okusho ukubalwa kwesikhombisi se-HDL kusuka kunani lengqikithi ye-cholesterol. Inombolo ephumayo kufanele ihlukaniswe yinkomba ye-LDL.
Ukunaka! Inkomba ejwayelekile ye-atherogenic yamadoda nabesifazane abaneminyaka yobudala engama-30 kuye ku-560 ingashintshashintsha phakathi kwamayunithi amabili no-3.7. Izinkomba ezingenhla amayunithi ama-3 angakhombisa ubungozi bokukhula kwesifo senhliziyo. Inkomba engezansi kwezinga elamukelekayo ayibonakali njalo ezigulini zeli qembu leminyaka. Ukuntuleka kwenani noma ukuthola umphumela we-zero kuwuphawu oluhle lwempilo yemithambo, inqobo nje uma amanani we-LDL ne-HDL eguquguquka ngaphakathi kwemikhawulo eyamukelekayo.
Njengomsizi welebhu cholesterol ekuhlolweni kwegazi
Izinkomba ezitholwe ngenkathi kuhlolwa igazi ziyahlukaniswa, okungukuthi, azinikezi ithuba lokuthola isithombe esifundisayo. Ngemiphumela yokuhlaziya, noma kunalokho ngokufaka imininingwane, imininingwane evela etafuleni izosiza.
Ibonakala kanjani i-cholesterol ekuhlolweni kwegazi
Ukuqanjwa kwesiLatini Ukuhlehlisa
I-TC Inani le-cholesterol ephelele
I-HDL I-high density lipoprotein
I-LDL I-density density lipoprotein
Tg I-lipoprotein ephansi kakhulu
IA Inkomba ye-Atherogenic
Izikhungo zanamuhla zokuxilonga zisebenzisa imishini yakamuva ukuthola umbhalo wokuhlolwa kwegazi emahoreni ambalwa. Kufanele kukhunjulwe ukuthi idatha etholwe ngomphumela wenhlolovo ayinakubhekwa njengeyiyona kuphela efanele. Uma isiguli sizizwa kahle, kepha izivivinyo zaselabhoratri zingenalo, isivivinyo kufanele siphindwe. Umphumela wokwelapha uqala ngemuva kokuzimisela okunembile kokuthuthukiswa kwe-pathology.
Ukunaka! Isizathu sokubonakaliswa kwephutha emiphumeleni yocwaningo kungenzeka ukuthi singahambisani nemithetho eyisisekelo yokulungiselela inhlolovo.
Ngaphezu kwalokho, izinkomba zingahluka kakhulu ngokuya ngendlela esetshenziswa ilabhorethri. Ukuthola isithombe esinembile, kufanele siqhathaniswe nenani lesethenjwa lendlela ethile yokuhlola. Kungakho ukucutshungulwa kwemiphumela yokuhlolwa kufanele kwenziwe kuphela ngudokotela owazi ukuthi i-cholesterol ikhonjiswa kanjani nokuthi yiziphi izindlela zayo ezamukelekayo ezingaba khona egazini lesiguli.
Ngemuva kokuhlolwa nokuthola imiphumela eqinisekisiwe, uma kunesidingo, indlela edingekayo yomphumela wokwelapha inqunywa. Imvamisa, ama-fibrate nama-statin asetshenziselwa ukuqinisa amanani. Ukudla kwabo kufanele kwenziwe ngaphansi kokuqashwa ngokuqinile kodokotela, ngoba kungathinta umzimba womuntu othize ngezindlela ezihlukile. I-Atherossteosis iyindlela yokuthambekela okulula ukuyivimbela kunokwelapha, ngakho-ke kudingeka unake isidingo sesivivinyo sokuvimbela, esenza ukuthi kunqume ngesikhathi ukuthi kukhona kwezidingo zokuthuthuka kwalesi sifo.
Kuboniswa kanjani cholesterol ekuhlolweni kwegazi?
Ema-laboratri amaningi, ukubizwa kwe-cholesterol ekuhlolweni kwegazi kukhombisa isiLatin. Manje sebesebenzisa kakhulu isifinyezo - i-HDL ne-LDL. Ukuqonda ukuthi i-cholesterol iboniswa kanjani ekuhlaziyeni, kufanele wazi izinketho eziningana zezifinyezo:
i-cholesterol ephelele, i-Chol (сholesterol), i-TC (i-cholesterol ephelele),
I-HDL, i-HDL (lipdrinin ephezulu yabantu) - lipoprotein ephezulu, "lipid" enhle,
I-LDL, i-LDL (i-lipoprotein ephansi kwabantu) - ama-lipoprotein aphansi, "kubi",
I-TG (Triglycer> Imitholampilo yanamuhla isebenzisa isifinyezo ngesiRashiya nangesiLatini. Kuya ngomtholampilo nelebhu okuyihlaziyo.
Yini okufanele yenziwe ukulungiselela ukunikela ngegazi kwe-cholesterol? Ngabe sikhonjiswa kanjani ifomu? Le yimibuzo ebuzwa njalo odinga ukwazi impendulo kuyo.
Ukuthola umphumela oqondile, kufanele ulandele imithetho:
yenqaba ukudla okungenani amahora angama-8 (nikela ngegazi esiswini esingenalutho),
Izinsuku ezingama-2-3 ngaphambi kwenqubo, yenqaba iziphuzo ezidakayo,
3 amahora ngaphambi kokuthathwa kokuqukethwe, ungabhemi,
yehlisa umoya kuze kufike esiphezulu futhi ungabi novalo,
Musa ukulayisha ngokweqile izinsuku ezingama-1-2 ngaphambi kwenqubo esebenza ngokusebenza komzimba,
Izinsuku eziyi-1-2 ngaphambi kokusampula kwegazi, nciphisa ukusetshenziswa kwamafutha nokudla okuthosiwe.
Abesifazane banganikela ngegazi cholesterol nganoma yisiphi isikhathi somjikelezo wokuya esikhathini. Lapho ingane ihlolwa, kubalulekile ukuthi iqinisekise ukuthi yehlisa umoya ngaphambi kokuthatha igazi. Ukuze wenze umntwana azizwe ephephile, woza ehhovisi lokunikela ngegazi kusengaphambili.
Kubalulekile! Uma umuntu edla izidakamizwa ezithinta inani le-cholesterol esegazini, khona-ke udokotela ohlinzekayo kanye nalowo osiza elebhu kufanele baxwayiswe ngalokhu.
Kubalulekile kakhulu ukwazi ngokuqokwa kwe-cholesterol ekuhlolweni kwegazi kulabo bantu abanezinkomba eziqondile zocwaningo. Kwesinye isikhathi umuntu akazi nge-cholesterol ephezulu egazini, kepha lesi yisimo esiyingozi.
Kunezinhlobo zezifo nemibandela lapho ukunikela ngegazi kuyinqubo yokuphoqelelwa:
ngezifo zohlelo lokuthinta kwenhliziyo,
Ukunakwa okukhethekile kufanele kunikezwe kulokhu kuhlaziya kwababhemayo kakhulu nabantu ababuthatha kabi utshwala. Imikhuba emibi enjalo ithinta kabi impilo yemithambo yegazi, ngakho-ke ukunikela ngegazi ukuze lihlaziywe kufanele isikhathi esisodwa ngonyaka.
Ukuqapha izinga le-LDL kumi amadoda ngemuva kweminyaka engama-45 nabesifazane ngesikhathi sokuya esikhathini. Abantu asebekhulile baba yizisulu ze-atherosulinotic plaque ngenxa yokuhamba kancane kancane, impilo engasebenzi, ukungondleki, imikhuba emibi. I-biochemistry yegazi iyakwazi ukubona izindawo “ezibuthakathaka” emzimbeni. Ukuhlolwa kwegazi okubanzi kusiza odokotela basheshe basungule ukuxilongwa bese kuthola uhlobo oluhle kakhulu lokwelashwa.
Iphrofayili ye-Lipid ne-cholesterol ephelele
Iphrofayili ye-lipid ukuhlaziya okwenziwe ngegazi okubandakanya izinto eziphilayo, kufaka phakathi isibuko se-lipid futhi kubonisa okuqukethwe yi-cholesterol ephelele, i-lipoprotein ephezulu nephansi, kanye ne-triglycerides. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuhlaziywa kunquma isilinganiso salezi zinkomba. Enye yezinkomba eziphambili zephrofayili ye-lipid yi-cholesterol ephelele. Kubonisa okuqukethwe okugcwele kwegazi kwento enjenge-sterol.
I-cholesterol ngotshwala obunamafutha obungancibiliki emanzini. Kunemithombo emi-2 ye-cholesterol emzimbeni womuntu: ingaphandle, okubangelwa ukusetshenziswa kokudla okunamafutha, kanye ne-endo native - umzimba ukhiqiza i-cholesterol ngokwayo. Ngokuphazamiseka okuthile kwe-metabolic, ukwakheka kwe-cholesterol kwenzeka ngokushesha kunokujwayelekile. Lokhu kuholela ekwandeni kwezinga layo egazini.
I-cholesterol ephelele ikhonjiswe ngesiLatini - CHOL. Ngokwezincomo ezikhona zeWorld Health Organisation, kuye kwamukelwa izinkomba ezilandelayo ezihlola izinga le-cholesterol ephelele egazini:
ngaphansi kuka-5.15 mmol / l - kahle,
I-5.15 kuye ku-6.18 mmol / l - umugqa womngcele,
ngaphezu kwe-6.2 mmol / l - inani eliphakeme.
Ukwanda kwalezi zinkomba kukhombisa hhayi kuphela ukuphazamiseka kwe-metabolic, kepha futhi nokuthuthukiswa kwezifo ezithile. I-Pathology ithathwa njengokukhuphuka noma ukwehla kwalezi zinkomba.
Isizathu sokwanda kwe-cholesterol ephelele, noma i-hypercholesterolemia, ibonwa nge-pathologies nemibandela elandelayo:
ukusetshenziswa ngokweqile kwamafutha agcwele ngokudla,
ukuvaleka kwemigqa ye-bile,
ukumisela kusengaphambili komndeni ku-hypercholesterolemia,
ukuntuleka kwe-hormone yokukhula.
Uma ngesikhathi sokukhulelwa owesifazane ubonise ukwanda okuncane kwe-cholesterol ephelele, ngakho-ke ungakhathazeki, ngoba lokhu kubhekwa njengokujwayelekile. Ukunikela ngegazi kungaholela emiphumeleni efanayo ngenkathi uthatha izidakamizwa ezithile eqenjini le-diuretics ne-androgens, kanye ne-cyclosporine, amiodarone, ergocalciferol.
I-Hypocholesterolemia, noma ukwehla kwe-cholesterol ephelele, kungenzeka lapho isiguli sihlole igazi ngemuva kokuzila ukudla isikhathi eside noma ekudleni okuphansi emafutheni anamandla. Ukwehla kwalesi sikhombisi kungakhombisa futhi i-malabsorption syndrome, i-necrosis yesibindi, i-hyperthyroidism, i-megaloblastic anemia, i-rheumatism.
I-Hypocholesterolemia ingenzeka ezigulini ezishiswe kakhulu, izifo ezinzima, noma ukubuyiselwa kwengqondo. Ngokwephulwa kwefa le-hemoglobin, inkomba ye-cholesterol nayo izoncishiswa.
Inani lama-triglycerides nama-lipoprotein ekuhlaziyeni
Ama-Triglycerides ayizingxube zama-acids akhethekile nama-glycerol. Ngokuyinhloko, lezi zinto ziqongelela kuthishu lwe-adipose, kuyilapho ku-plasma ziqukethwe inani elincane. Ama-lipid anjalo angumthombo oyinhloko wamandla emzimbeni. Kepha lapho izinga lama-triglycerides lenyuka kanye nama-lipoprotein aphansi, ingozi yokuba nezifo zenhliziyo ikhuphuka kakhulu.
Ama-triglycerides angaphezulu asele ngemuva kokushiswa nokuguqulwa abe amandla okuhlanganisa i-cholesterol futhi afakwa emafutheni. Ama-Triglycerides akhonjiswa ngezinhlamvu zesiLatini iTrig. Lapho i-triglycerides esegazini idlula inkomba engaphezu kwe-2.3 mmol / l, kukhona zonke izizathu zokukholelwa ukuthi isiguli sakha i-atherosclerosis. Inani elingaphezu kuka-5.6 mmol / L libhekwa njengesinkomba esiphezulu kakhulu. Inani elijwayelekile lisuka ku-1.8 laya ku-2.2 mmol / L.
Ama-triglycerides aphezulu nawo abonwa ngoshukela wegazi ophakeme. I-cholesterol ingaba ngezinhlobo ezimbili: kwabantu abaphansi kakhulu kanye nokuqina kwabantu. Zombili izinkomba zibalulekile ekuhloleni ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis kanye nokubekeka phambili kuyo. I-cholesterol esezingeni eliphansi ibhekwa njenge "kubi" ngoba yiyona efaka odongeni lwemithambo yegazi ngesimo sothotho lwe-atherosranceotic.
Isakhiwo saso sikhulu kangangokuba empeleni asincibilikisi futhi sihlehlisiwe. I-density lipoproteins ephansi iyinkomba ebalulekile ku-biochemistry yegazi, ngoba iyimbangela yokuthuthukiswa kwe-atherosclerosis. Futhi, lezi zinto zibizwa nge- atherogenic. Zenziwe ngesibindi, futhi umsebenzi wazo oyinhloko ukuthutha ama-triglycerides ohlelweni lokujikeleza.
Amaningi ala lipids ahlanganiswa amaseli wesibindi, futhi amanye eza nokudla.Lapho isibindi siqala ukukhiqiza i-cholesterol enjalo ngokweqile, ngaphezu kwalokho, ivela ngaphandle, khona-ke ayinasikhathi sokusetshenziswa futhi iqoqana emzimbeni. I-LDL (low density lipoproteins) isuka kokujwayelekile kuye phezulu kakhulu. Inani elilungile lizinga lama-lipoprotein aphansi we-low-hhayi ngaphezulu kwe-2.6 mmol / l.
Ochwepheshe abamukelekayo bayaqaphela lapho le nkomba ikububanzi obungu-2.6-3.35 mmol / l. Kepha lapho ukuhlaziya kuveza ukwanda kwayo kusuka ku-3.4-4.1 mmol / l, khona-ke lokhu sekuyinani lomugqa. I-LDL kusuka ku-4.1 kuya phezulu ngo-4.9 mmol / L imele phezulu futhi iphakeme kakhulu. I-cholesterol enhle, noma i-lip density lipoproteins ephezulu (HDL), inemiphumela yokulwa ne-atherosulinotic.
Abakhuthazi ukubekwa kwamafutha odongeni lwemithambo yegazi, ngaphezu kwalokho, balwa nale nqubo. Lapho kuhlolwa imiphumela ye-lipidograms, ukwehla kwe-HDL kubhekwa njengophawu olubi. Ukunyuka kwezinga layo akubonwa njenge-pathology. Izinga le-lipoproteins ephezulu yokulinganisa lilinganiswa ngamanani amukelwe ezenzweni zomhlaba wonke.
Ngakho-ke, izinga le-HDL kwabesifazane lingaphansi kuka-0,9 mmol / l libhekwa njengesibonakaliso sengozi enkulu yokuqhamuka nesifo senhliziyo nesifo senhliziyo. Uma le nkomba emadodeni amadala ingaphansi kuka-1.16, khona-ke ibhekwa ngokufanayo. Isimo se-cholesterol ephezulu yokuxinana kubo bobabili ubulili singaphezu kwe-1,6 mmol / l. Leli nani libonisa ubungozi obuphansi bokuthuthukisa isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Ukuqina, noma inkomba, ye-atherogenicity kuboniswa uphawu "CATR". Lesi sikhombisi sikhombisa isilinganiso samaphoprotein aphezulu futhi aphansi. Ihlola ubungozi bokuthola isifo senhliziyo. Inkomba ye-atherogenicity iyinkomba yokugcina yephrofayili yonke ye-lipid, ngoba ibalwa ngesisekelo sazo zonke ezinye izinkomba zayo.
Inani elijwayelekile lenkomba ye-atherogenic ngu-2-2, 9 mmol / l. Kwabesifazane, inani lamayunithi angama-3,2 livunyelwe kakhulu, kuyilapho kwabesilisa, inani elifanayo liphakeme kancane - 3.5. Ukukhonjwa kwesilinganiso esinjalo ngenhla kuka-4.7 mmol / l kukhombisa ukuthi umuntu unenqubo ebizwayo ye-atherosclerotic emikhunjini.
Ukuhlaziywa kwe-cholesterol kunikezwa esiswini esingenalutho, kunconywa ukuqhuba lo mcimbi ekuseni ngemuva kokulala ubusuku obude. Ngakusasa, kufiseleka ukukhipha noma ikuphi ukucindezeleka kwengqondo nokuphazamiseka ngokomzimba. Ukuphuza ngaphambi kokuphasa isivivinyo akwamukeleki. Iphrofayili ye-lipid ivame ukubekelwa ukunquma imvelo ye-cholesterol futhi ikhombe okungahambi kahle.
Ukutholwa kusenesikhathi kwe-pathology kuzovimbela ukuqhubekela phambili kwe-atherosclerosis kanye nokuthuthukiswa kwezinkinga zayo, njengokufakelwa kwe-myocardial, isifo senhliziyo se-coronary, stroke. Kodwa-ke, ngokuya ngemiphumela yokuhlaziywa kuphrofayela ye-lipid, akunakwenzeka ukucacisa ngokunembile usayizi we-cholesterol plaque, uma ikhona.
Ukwazi ukuthi i-cholesterol ikhonjiswa kanjani kuhlolo lwegazi, ungabona ukuthi ngabe kukhona yini ukushoda noma okweqile kwama-lipoprotein. Iphrofayili ye-lipid ifaka izinkomba ezimbalwa ezibalulekile, kepha okufundisayo kakhulu yinkomba, noma ukubumbana, kwe-atherogenicity.
Ngemuva kokuthola imiphumela yocwaningo, okufanele ubheke:
Khombisa i-cholesterol ephelele ekuhlaziyeni kwe-biochemical kwegazi ngamafinyezo afana ne- "Chol" noma "TC". Imvamisa, inkomba ayidluli ku-5.2 mmol / L. Ngokwanda, i-atherosclerosis iqala ukukhula.
I-Latin "TG" noma "TRIG" isetshenziselwa ukubonisa i-triglycerides. Akhiwa odongeni lwamathumbu ngenxa yokuvuselelwa kwemikhiqizo yokuwohloka kwamafutha bese kuthi lapho efakwa amafomu okuhamba, angene egazini elijwayelekile. Ngokuvamile, ama-triglycerides awangeqi ku-1.77 mmol / L.
Isifinyezo esithi "HDL" sisetshenziswa odokotela ukwehlisa ukushuba okukhulu kwe-lipoprotein. Lezi zindlela zokuhamba ze-lipids zisebenza ukuvikela isifo sokuqina kwemithambo yegazi: zithatha i-cholesterol eyeqile ezithanjeni zangaphakathi bese ziyidlulisela esibindini ukuze icutshungulwe futhi ikhiphe emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, bangathatha i-cholesterol kwabanye abathwali bayo. Isikhombi kufanele sibe ngaphezu kwe-1.20 mmol / L.
I- “VLDL” ─ iphoprotein engaphansi kakhulu kwabantu edlulisa i-cholesterol kanye namafutha acid kuma-izicubu njengesakhiwo nokwakha amandla amancane. Lolu hlobo lwe-lipoprotein lwakhiwa esibindini, lungena egazini futhi kancane kancane lukhipha i-cholesterol namafutha acid ngaphansi kwesenzo se-vascular lipoprotein lipase. Kulokhu, ama-lipoproteins aguqulwa afakwe alabantu abaphansi kakhulu. Indima yabo ekuqhubekeni phambili kwezilonda zamathambo ze-atherosulinotic kufakazelwe. Imvamisa, inkomba kayiphezulu kune-1.04 mmol / l.
Izinhlamvu ezithi "LDL" zisho ukuthobelana kwabantu ngezinga eliphansi. Akhiwa ngenxa yokwehla kokuqanjwa kwama-lipoproteins ngesilinganiso esiphansi kakhulu sokuhlushwa kwamafutha. Umsebenzi wabo oyinhloko, kanye nalawo achazwe ngenhla, ukubuya kwe-cholesterol kwezicubu. Babamba iqhaza ekwakhiweni kwe-atherossteosis. Kufanele ibe ngaphansi kuka-3.00 mmol / L.
"IAI" e ukusebenza kahle kwe-atherogenicity. Ibonisa isilinganiso sezingxenyana ze-atherogenic kanye ne-non-atherogenic yama-lipoprotein. Ukuyikhulisa ngaphezulu kwe-3.5 mmol / L kukhulisa ubungozi bokukhula kwe-atherosulinosis nezinkinga zayo.
Okubaluleke kakhulu ukuzimisela kwe-cholesterol kanye nezingxenyana zayo ngabantu:
Ngokuqagela ifa. Amacala omndeni adumile enkambo yesifo sokuqina kwesibindi.
Labo abahlushwa i-hypertension ye-arterial, ikakhulukazi uma kungasungulwa ukulawula okwanele kwalesi sifo, kuneziqephu zokucindezela okwandayo.
Ngokukhuphuka kwesisindo somzimba (inkomba yomzimba eningi elingama-30 isivele ikhombisa ukukhuluphala, uma unganciphisi isisindo somzimba kwaba ngokujwayelekile, ubungozi besifo senhliziyo luyanda).
Abahlukumeza utshwala nababhemayo.
Abadala, abesifazane be-postmenopausal.
Kubalulekile ukulawula izinga le-lipid yakho futhi ulilungise ngesikhathi. Kwanele kumuntu ukuthi aguqule indlela odla ngayo nendlela yakhe yokuphila, umuntu udinga ukwelashwa. Zonke izinqumo zenziwa udokotela ozobakhona, uzosiza ekugcineni impilo yeziguli iminyaka eminingi ezayo.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-cholesterol kungenye yezifundo ezibaluleke kakhulu ezisiza ukuhlola izinga lemizimba ye-cholesterol esegazini, okungakhombisa impilo yomuntu. Ukutadisha okufika ngesikhathi kusiza ukukhomba ubukhona be-pathologies ezigabeni zokuqala (isifo sokuqina kwemithambo yegazi, i-thrombophlebitis, isifo senhliziyo). Kunconywa ukunikela ngegazi nge-cholesterol okungenani isikhathi esingu-1 ngonyaka, okuzokwanela ukuzihlola ngokwakho kwempilo jikelele. Okushiwo yimiphumela yemiphumela yokuhlaziywa, nokuthi kwenzekani ngokwemvelo, sizokuhlaziya okunye.
I-Cholesterol: isitha noma umngani?
Ngaphambi kokuthi uqhubeke ekuqondeni, kudingeka uqonde ukuthi iyini i-cholesterol. I-cholesterol yindawo yokugcoba enamfutha ekhiqizwa amaseli wesibindi, izinso kanye nezindlala ze-adrenal ukuze kuqiniswe ulwelwesi lwamaseli, yenze kube lula ukuqina kwazo. Futhi, la mangqamuzana enza imisebenzi elandelayo ewusizo yomzimba:
ubambe iqhaza ekwakhiweni kanye nasekufakwaleni i-vitamin D,
ubambe iqhaza ekwakhiweni kwe-bile,
vumela amangqamuzana abomvu egazi ukuthi agweme i-hemolysis ngaphambi kwesikhathi (ukubola),
thatha iqhaza elibonakalayo ekwenziweni kwama-hormone e-steroid.
Le misebenzi ebalulekile ye-cholesterol ikhombisa ukubaluleka kwayo okuphezulu komzimba. Kodwa-ke, uma ukugxilwa kwayo kungaphezu kokujwayelekile, kungahle kube nezinkinga zempilo.
I-Cholesterol ngokwayo ayisiyoncibilikiswa emanzini, ngakho-ke, ngokuhamba kwayo okugcwele nokulahla, kudingeka ama-molecule amaprotheni - ama-apoprotein adingekayo. Lapho amangqamuzana e-cholesterol enamathela kuma-apoprotein, kwakhiwa ikhemikhali elizinzileyo - i-lipoprotein, encibilika kalula futhi ihanjiswe ngokushesha ngemithambo yegazi.
Kuya ngokuthi mangaki ama-molecule wamaprotheni ahlanganiswe ne-cholesterol molecule, ama-lipoproteins ahlukaniswe izigaba eziningana:
I-lipoproteins ephansi kakhulu (i-VLDL) - ingxenye eyodwa kwezintathu yam molecule wamaprotheni nge-molecule eyodwa, encane ngokwenzakalelayo ukunyakaza okugcwele nokususwa kwe-cholesterol. Le nqubo inomthelela ekuqongeleleni kwayo egazini, okuholela ekuqhekekeni kwemithambo yegazi nokukhula kwezifo ezahlukahlukene.
Ama-density lipoproteins aphansi (LDL) - ngaphansi kwe-molecule elilodwa lamaprotheni. Amakhompiyutha anjalo awasebenzi futhi awumbisi kahle, ngakho-ke maningi amathuba okuzinza emikhunjini.
Ama-high density lipoproteins (HDL) ayizinhlanganisela ezinzile ezihanjiswa kahle futhi zinyibilika emanzini.
Ama-Chylomicrons ayizinhlayiya ezinkulu ze-cholesterol ezinokuhamba okulinganiselayo nokuguquguquka okungatheni emanzini.
I-cholesterol yegazi iyadingeka, noma kunjalo, ezinye izinhlobo zayo zingavusa ukuthuthukiswa kwezifo. Ngakho-ke, ama-lipoprotein aphansi kakhulu abhekwa njenge-cholesterol embi, eholela ekuqhekekeni kwemithambo yegazi. Ngasikhathi sinye, ama-lipoprotein aphezulu wokuqina kwabantu ayisiqiniseko sempilo nokubaluleka kwazo zonke izinqubo ze-metabolic emzimbeni. I-biochemistry ikuvumela ukuthi ukhombe isisusa ekwakhekeni kwezifo ezihambisana nokwakheka kwe-cholesterol egazini.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-cholesterol: izinkomba eziphambili kanye nokujwayelekile kwabo
Ukuze ubone ukusatshalaliswa kanye nokuba khona kwazo zonke izinhlobo ze-cholesterol esegazini, kusetshenziselwa ukuhlaziya okukhethekile, imiphumela yayo efakwe kuphrofayela ye-lipid. Lokhu kufaka izinkomba ezifana ne-cholesterol ephelele, ama-triglycerides, ama-lipoprotein aphezulu kwabantu, i-lipoproteins ephansi kwabantu, inkomba ye-atherogenicity. I-cholesterol yegazi inqunywa kusetshenziswa ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical. Ukuhlaziywa okuningiliziwe kukuvumela ukuthi ubone izinkinga ezingaba khona zempilo, okucasulwa ukwanda kokuhlushwa kwe-cholesterol embi. Ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile kukhombisa isithombe esingeqile, ngakho-ke uma imiphumela yaso iphambuka kokujwayelekile, kunengqondo ukwenza ucwaningo olunemininingwane ethe xaxa.
Inkomba ye-cholesterol ephelele ku-plasma yegazi ikhombisa ukugxila kwayo ku-mmol / L. Lesi sikhombisi sibonisa isimo esijwayelekile semithambo yegazi negazi, futhi singakhombisa ikhwalithi yezinqubo ze-metabolic. Lokhu kucubungula kungukuhamba phambili, ngoba kuhlola isimo sempilo, kanye nesidingo sesifundo esingeziwe, esincanyana (i-HDL, LDL).
Isikhombi esijwayelekile sincike ezicini ezifana nobudala nobulili. Cabanga ngamanani ejwayelekile we-cholesterol ephelele yeminyaka ehlukene namaqembu ubulili, aqukethe itafula.
Iminyaka Amadoda mmol / L Abesifazane mmol / L
Izingane ezisanda kuzalwa nezingane ezingaphansi kweminyaka emi-2 1,9-3 2,9-5,1
Iminyaka engu-2-12 ubudala 2-4 2,9-5
16-16 yeminyaka 2,9-4,9 3,5-5,17
Iminyaka engama-21-30 ubudala 3,5-6,5 3,3-5,8
Iminyaka engama-31-50 ubudala 4-7,5 3,9-6,9
Iminyaka engama-51-65 ubudala 4-7,1 4,5-7,7
Ngaphezulu kweminyaka engama-65 4-7 4,2-7,8
I-cholesterol ephelele ihlobene ngqo nezinqubo ze-metabolic ezenzeka emzimbeni kanye nezici zokudla okunempilo, ngakho-ke amanani ayo empilweni yonke ahlukile. Ngesikhathi sokukhiqizwa kwama-hormone, izinkomba zivame ukuba nomkhawulo ophansi, futhi eduze nokuguga, lapho i-metabolism incishiswa kakhulu, izinga layo liphindwe kaningana.
Lesi sigaba se-cholesterol siyingozi kakhulu, ngakho-ke, amanani anjalo avumelekile ahlukaniswa njenge-2.3-4.7 mmol / L kwabesilisa kanye ne-1.9-4.2 mmol / L ejwayelekile kwabesifazane. Ukweqisa izinkambiso zalezi zinkomba kukhombisa ukuba khona kwezifo zohlelo lwezinhliziyo, kanye nokwehla kwenqubo ye-metabolic.
Kwabesilisa, umkhawulo ophezulu ufinyelela ku-3,6 mmol / L, ngenkathi okujwayelekile kwabesifazane kuncane - 2,5 mmol / L. Lokhu kungenxa yezici zokudla okunempilo, ngoba umzimba wesilisa udinga ama-carbohydrate amaningi namafutha. Ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical kusiza ukukhomba izinga le-triglycerides, elihlobene nenani eliphelele legazi emzimbeni.
Ukuhlaziya kanjani futhi nini?
Ochwepheshe batusa ukuthatha izivivinyo ze-cholesterol okungenani isikhathi esingu-1 ngonyaka, uma kungekho zikhalazo zezempilo, futhi njalo ezinyangeni eziyisithupha, inqobo nje uma kunezinkinga ngesisindo eseqile, imithambo yegazi nenhliziyo. Ukuzithiba kuzonciphisa izingozi zokuthola izindlela ezisongela impilo, futhi kunciphise namathuba okufa ngaphambi kwesikhathi.
Igazi lithathwa emthanjeni, kodwa ngaphambi kwenqubo, kufanele ulungiselele:
Ungadli amahora angama-5-6 ngaphambi kokusampula kwegazi.
Ungabuphuzi utshwala ngosuku olwedlule.
Yidla okujwayelekile, unciphisa ukudla okunoshukela futhi okunamafutha.
Yehlisa ukucindezela ngokomzimba nangokwengqondo.
Phumula kahle futhi ulale.
Gwema ukucindezelwa nokuphazamiseka kwemizwa.
Ukuhlaziywa kusiza hhayi kuphela ukuqapha isimo sempilo, kodwa futhi kukhombisa namandla ezokwelashwa kwezifo ezithile.
Ngakho-ke, ukuhlela ukuhlolwa kwegazi kwe-cholesterol kuqukethe izinkomba eziningana, ngasinye sazo sibaluleke kakhulu. Lokhu kuvivinya kumele kube kubantu abakhuluphele abanezinkinga zenhliziyo kanye nohlelo lwenhliziyo. I-decryption ekhishwe yiziguli elabhorethri ilula impela futhi iqukethe inani elincane lemininingwane. Lokhu kukuvumela ukuthi uhlole izinga lakho lezempilo ngokwakho, ngaphambi kokuthola uchwepheshe.
Kuyini lokhu kuhlolwa kwe-cholesterol?
Ekuhlolweni kwegazi okujwayelekile, akunakwenzeka ukuthola ama-cholesterol molecule. I-biochemistry isetshenziselwa ukubakhomba. Kwembula i-cholesterol "embi", ekhonjiswa ngoonobumba abakhulu bezimpawu zayo ze-biochemical.
Ukuhlaziywa kukhonjiswa kubantu abasola ukuphazamiseka kwe-atherosulinotic ezindongeni ze-vascular. Lesi sakamuva singakhombisa lezi zimpawu ezilandelayo zomtholampilo:
Ukucindezela kokudlula. Ziyabonakala uma zilinganisa nge-tonometer nezinkomba zokuqopha kudayari ekhethekile. Uma umfutho wegazi we-systolic ne-diastolic ukhuphuka njalo, sikhuluma ngomfutho wegazi ophakeme ngemuva kwesizinda se-atherosclerosis.
Isiyezi, i-paresthesia, kanye nokusebenza kwezinzwa. Izimpawu ziyavela lapho inqubo ye-atherosulinotic ifinyelela emikhunjini emikhulu nemincane yohlelo lwezinzwa oluyinhloko noma olufiphele.
Ukuphefumula. Ngokuphikisana nesizinda somfutho wegazi ophakeme, kuvela inhliziyo ethi "pulmonary". Kubonakala ngokukhuphuka kwe-ventricle yesobunxele - ukuvuvukala kwayo. Isiguli siqala ukwehluleka ukuphefumula.
I-Cyanosis kanxantathu wesolabial. I-cyanosis yama-phalanges we-distal weminwe yemikhawulo ephezulu nangaphansi ihlala ihlangana nayo. Lokhu kukhombisa ukungabi namandla i-oxygenation kwalezi zingxenye zomzimba.
Ukugcwaliswa kwama-capillaries, imithambo nemithambo yegazi ngaphansi kobuso besikhumba. Imvamisa ngasikhathi sinye ukuhanjiswa kwabo kuyabonakala.
Ukwehlulwa kwemisebenzi yesiguli. Lokhu kufaka phakathi amandla okucabanga, ukukhumbula imicimbi emisha nokukhumbula ezindala.
Izinto ezibonakalayo zithathwa ngumhlengikazi elabhorethri. Ukulungiselela okukhethekile kuphela okudingekayo esigulini. Ngosuku olwandulela isivivinyo, isiguli kufanele siyeke ukudla ukudla okunamafutha nokuthosiwe, ukudla okunokuqukethwe okuphezulu kwezivikelo, ama-stabilizer, odayi kanye nabathuthukisi be-flavour. Ngosuku lokuvakashela egumbini lokuhlinzwa, isiguli akufanele sibe nokudla kwasekuseni. Ungaphuza kuphela amanzi ngaphandle kwegesi. Umuntu akufanele azithwalise umthwalo wokusebenza ngokomzimba nangokomzwelo. Konke lokhu kungathinta isizinda saso se-hormonal kanye ne-homeostasis ejwayelekile yomzimba. Ukushaya indiva imithetho yokulungiselela kufaka imiphumela engamanga kanye nesidingo sokuhlolwa kabusha.
Ukuhlolwa kwegazi okwelashwa kwe-cholesterol kwenziwa endaweni ekhethekile yokuhlinza ngaphansi kwezimo eziyinyumba.Ukuze aqoqe isihlanzana esiphelele sezinto eziphilayo, umhlengikazi ubeka i-flagellum engalweni yesiguli bese ecela isiguli ukuba sishukume ngaleli banga, kube sengathi sicindezela isandisi. Ngemuva kwalokho, i-tourniquet iyachithwa bese kwenziwa i-punning ye-vein. Njengoba sesiqoqe inani elifanele le-mass legazi, iziqukathi ezenziwa nge-vacuum ziyabekwa uphawu bese zithunyelwa esigabeni esilandelayo. Ezimweni zaselebhu, ochwepheshe bazama ukuthola ama-lipoprotein aphezulu, aphansi futhi aphansi kakhulu, ama-cholesterol molecule nama-triglycerides ezintweni ze-hematological.
I-cholesterol ikhonjiswa kanjani emiphumeleni?
Ukuze uthole imininingwane efanelekile, kufanele wazi ukuthi inkomba ngayinye ibhalwe kanjani. Futhi uma ekuhlaziyeni kwamakhemikhali amakhemikhali inani eliphelele le-cholesterol liboniswa igama elithi "lipids", khona-ke izifinyezo zihlala zibhalelwe izingxenyana zalo. Lokhu kuncishiswa kuvumela odokotela ukuthi bakwazi ukuthola ngokuzenzakalelayo igama lesikhombi olifunayo. Ukuqokwa kwe-cholesterol ekuhlolweni kwegazi le-biochemical isifushaniso samagama ajwayelekile ezokwelapha noma lawo asesiLatin, wethulwa etafuleni:
Ukuthola inani le-cholesterol ephelele, kuhlaziywa ama-biochemical elebhu noma kusetshenziswa idivaysi ephathekayo enemivimbo yokuhlola. Imiphumela izoba inhloso uma ilungiswe kahle. Indwangu ithathwa ekuseni, esiswini esingenalutho. Kubalulekile ukuhlangabezana nezidingo:
ungafaki utshwala ngosuku,
ungadli kuze kube inqubo amahora 12,
ngezinsuku ezimbili ukwenqaba ukudla okunamafutha,
Ngaphambi kwenqubo, phumula, yehlisa umoya.
Kunemigomo yobudala yokuhlushwa kwama-cholesterol molecule. Isibonelo, ezinganeni ezisanda kuzalwa, i-3.5 mmol / L ibhekwa njengenani elijwayelekile, futhi ezinganeni ezisencane le nkomba ikhuphuka ifike ku-5 mmol / ilitha.
Ukuguquguquka okunjalo kubangelwa ukukhula komzimba, njengoba kushiwo ekushicilelweni kwesayensi kwiphephabhuku i-Atherosulinosis neDyslipidemia. Ukuhumusha kubantu abadala kuvame ukunikeza amaphutha, ngoba okuqukethwe kusegazini labo lama-cholesterol molecule, ama-lipoprotein ama-densities ahlukene kanye nama-triglycerides kuncike endleleni yokuphila, izici zehomoni kanye nesigaba sobudala. Isibonelo, kwabesifazane, i-LDL ne-VLDL bayakwazi ukukhula ngesikhathi sokuya esikhathini, ukukhulelwa nokuqunjelwa. Inkomba ejwayelekile kubo yi-3.5, kuyilapho abesilisa - 4.8 mmol / l.
Ukuguqula ukuhlolwa kwegazi kwe-cholesterol
Izinga le-cholesterol egazini elivela emthanjeni lizoya ngokuya ngemishini yelebhu, futhi amanani angahluka. Amanani azohluka kubantu abadala nezingane, abesilisa, abesifazane. Inani lithinteka ngokukhulelwa, likhuphuka kubantu asebekhulile. Ulwazi lubalulekile - yini imvelo ye-cholesterol esegazini - ngoba ibaluleke kakhulu ezinqubweni zomzimba. Ngokuzibandakanya kwalolu hlobo kwenzeka:
ukulawulwa kokusebenza kwenhliziyo emzimbeni weseli,
ukwakhiwa kwe-serotonin, uvithamini D,
ukwakheka kwama-hormone ocansi.
Le nto eqhamuka esibindini ihanjiswa ngomzimba njengengxenye yama-lipoprotein - ukuhlanganiswa kwamaprotheni. Ingxenye yesithathu yayo isefomini yamahhala. Ucwaningo lokuqukethwe kwe-lipoprotein lubizwa ngokuthi i-lipid spectrum futhi kufaka izinkomba eziningana. Ukuqokwa okulandelayo kwe-cholesterol ekuhlolweni kwegazi kuyamukelwa:
I-Chol - i-cholesterol ephelele noma i-cholesterol,
HDL - HDL - lipoprotein ephezulu kwabantu,
I-LDL - HDL - ama-lipoproteins aphansi,
I-TG - TG - triglycerides.
Kunemibono yekholesterol embi, enhle. I-HDL - ithathwa njengembi. Lokhu kubangela ukwakheka kwezigcawu ezigcwele imithambo yegazi. Ukwehluleka kwenhliziyo kungenzeka, amatshe ngendlela ye-gall bladder. Ukuyikhulisa kubangela ukudla okunamafutha. Inkomba yabesifazane ayinciphile kune- - 1,02 mmol / l. Kwabesilisa, kuze kufike ku-1.49 mmol / L. Ungangehlisa inani ngokudla, unciphise ukudla okunamafutha, ushukela. Umsebenzi womzimba, imithi ekhethekile - ama-statins, azosiza ukunciphisa.